Ayvoorikoost waancaa Aafrikaa 30ffaa harkatti galfatte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Ayvoorikoost waancaa Aafrikaa 30ffaa harkatti galfatte
‘Kilabii kee wojjiin yoo injifattu waan raajiidha. Biyya kee wojjiin yoo ta’e ammo waan hinamanamneedha,’ jedhe Yaayaa Turee erga biyyi isaa waancaa Aafrikaa 30ffaa injifattee booda yoo BBC tti dubbatu.
Injifannoon kuni garee Ayvoorikoostiif baay’ee adda ture. Erga bara 1992, ganna 22 booda, yeroo jalqabaatiif Ayvoorikoost waancaa Aafrikaa si’a heddu harka isiitii mucucataa bahaa ture kan dhumarratti harkatti galfatte. Humnaa taphattoota biyyi tuni omishte kan ilaalu hundi Ayvoorikoost geeba Aafrikaa injifachuuf yeroo kana guutuu eeguun isii irra hinturre jedhu. Bara as dhihoo kanatti si’a 2 xumura irra geettus harka duwwaadha kan gara biyyattii deebi’uuf dirqamte. Amma garuu dhuma irratti milkoofte.
Tapha waancaaf godhame kana irratti gareen kuni taphaan caalamuu qofa osoo hintaane, ligooree jalqabaa lamaanuu Wilfireed Boniifi Juniyer Talloon wolitti aansanii galchuu dadhabuu isaaniitiin ammas injifatamte yeroo jedhamuttiidha kan qarqara kufaatii irraa dandamatee moo’attee bahuu dandeette.
Taphni garee Gaanaafi Ayvoorikoost jiddutti geggeeffame ligooreedhaan 9 – 8n kan goolabame. Injifannoo Ayvoorikoostiif gumaacha guddaa kan godhe gooli-eegaa Boobakar Baariiti. Boobakar Baariin rukuttaa goli-eegaa Gaanaa fashalsiisuun alatti goolii inni laakkofsiise kan Ayvoorikoostiin waancaaf geessite. Tapha kana irratti wonti nama raaju, keessattuu ligooree irratti, namoonni ligooree akka dhiitaniif dursi kennameef ligooree yoo dhaban, isaan gara boodaatti turfaman hundi [goli-eegaa Gaanaa osoo hindabalatin] kubbaa kiyyoo keessa marmarsuu isaaniiti.
Bifuma wolfakkaatuun bara 1992 Ayvoorikoost yeroo jalqabaatiif waancaa Aafrikaa kana moo’atte Gaanaa injifachuudhaan. Yeroo sanittis taphni sa’aa idileetti akkuma isa kanaa goolii malee dhumate. Ayvoorikoost ligooreedhaan Gaanaa 11 – 10n injifattee kan shaampiyoonaa bara 1992 taate.
Leenjisaa Gaanaa kan ta’e Avraam Graant kana dura yeroo kilabii Cheelsii leenjisaa turetti Cheelsiin ligooreedhaan 6- 5n Manchastar Yunaayitidiin moo’atamee Champions League 2008 kan dhabe. Abaarsa moo maaliidha kan jedhu kan gaafatame leenjisaan kuni, ‘waan akkanaatti hinamanu,’ jechuudhaan deebiseera.
Didiyer Drogbaan, hagayya 2014 tapha idiladdunyaa irraa kan boqate, mana isaatii taphicha hafuurri itti gabaabbataa hordofaa turuu isaa dubbateera.
Previous articleFilannoon biyyoolessaa Naayjeeriyaa gara boodaatti harkifame
Next articleLammiiwwan Itoophiyaa lama Aafrikaa Kibbaa keessatti ajjeefaman